UNFC အနေနှင့်သာ အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးလိုဟု KIO ထုတ်ပြန် | ဧရာဝတီ
နန်းသီရိလွင်| January 21, 2013 | Hits:3,104
5 | | ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလလယ်က တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- Steve Tickner/ ဧရာဝတီ)
(ဧရာဝတီ သတင်းထောက် လဖိုင် ပူးပေါင်းရေးသားသည်)
လဂျားယန်သာမက ကချင်ပြည်နယ်အနှံ့ ထိုးစစ်များရပ်ပေးသင့်ကြောင်း KIO ထုတ်ပြန်
လားရှိုး – မူဆယ် ကုန်တင်ယာဉ် လက်ပစ်ဗုံးဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရ
11 Responses	LeaveaReply Cancel reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment swe htwe January 21, 2013 - 5:51 pm	We think KIO should not attack police station. Although we don’t like police ,they are human beings. We think they don’t deserve to die. If KIO continue attacking just like that event, the war will never end. Please take care of the people.
Reply	Gonsam January 21, 2013 - 6:09 pm	Yes,I understand you lanan.Kia men are fghting and wife ,kids and parents are in refugee camp.Don’tworry for them.Blankets and foods are on the way.Refugee camp is second Laiza for broken kia men.You still trust UNFC too?UNFC said,if MM army fight one of our group,we all will fighting back…yes?Did MM army scared,afraid?Lanan,they don’t care all of you.They can fight all of your lovely groups at the same time.Anyway, think about for other people living in kachin state.kachin state is not only for kia and kio men.You can not control and can not takecare even for Laiza, how can you control all kachin state?That is Lanan.Enjoy your life and safe well in china.Enjoy chinese new year in there.Happy NewYear.
Reply	ကချင်လေး January 21, 2013 - 8:02 pm	ဗန်းမော်သားပါ။ဗန်းမော်မှာစတိုက်တာက KIA ပါ။စိတ်ထားမှန်ဖို့လိုပါတယ်။ဖမ်းထားတဲ့ လူငယ်တွေကို ပြန်လွှတ်ပေးပါ။သတင်းထောက်များ သတင်းမှန်သိချင်ရင် ဗန်းမော်လာခဲ့ပါ။
Reply	Lin Let January 21, 2013 - 9:34 pm	လိမ်လည်နေသော ဒီအစိုးရ၊ သိန်းစိန်သည်ပင်လျှင်၊ DSA အတွေးအခေါ်ပါနေသေးကြောင်း၊ သူပြောတာနဲ့ တစ်ခြားစီပါ။ ပြောင်လိမ်နေသောသိန်းစိန် မြန်မာပြည် လိမ်ညာရင်းနဲ့ အုပ်ချုပ်တော့မှာ ပေါ့။ သိန်းစိန်ရယ် မင်းအောင်လှိုင် တောင်မဆုံးမတတ်ရင် ၊ သေလိုက်ပါတော့။ အမိန့်နာမခံတဲ့ မင်းအောင်လှိုင် ဒုက္ခအပေါင်းနဲခညောင်းနိုင်ပါစေလို့ ဆုချွေပေးလိုက်တယ်
Reply	soe naing January 21, 2013 - 10:04 pm	ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ ဗမာကြီးစိုး အစိုးရ နှင့် ဗုဒ္ဒစစ်တပ်တွေက ကချင်ပြည်သူတွေကို ဘာသာရေး ၊ လူမျိုးရေးအရ မျိုးပြုတ် တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီ ကချင်ပြည်သူတွေကို ဗမာကျူကျော်သူတွေရဲ့ရန်မှကာကွယ်နိုင်ရန် တိုင်းရင်းသားညီကိုများ အားလုံးပူးပေါင်းလက်တွဲကြပါ….
Reply	zaw January 21, 2013 - 11:44 pm	not finished, if you hold the gun they will hold the gun. BOTH don’t look population.
No burma, no cachin, no cayin, no mon, no shan ……. etc.
MUST BE UNITED STATE OF MYANMAR. All are together.
Look population, some are rich, most are poor, in democracy country.
Rich guy more pay tax, poor guy no or low pay tax correctly to government.
FEDERAL GOVERNMENT WILL SUPPORT POPULATION .
Reply	Ko Khine January 22, 2013 - 12:09 am	ကချင်အရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်အနည်းငယ်အကြံပြုဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ ကချင်လူမျိုးတွေသတိထား ရမည့်အရာတခုက လက်ရှိမြန်မာ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံ ထိပ်တန်းခေါင်းကြီးပိုင်းရဲ့ တာဝန်ခွဲဝေမှူတွေကြည့်လိုက်ရင်အသိသာကြီးပါ။အဲဒီ ထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရိသူတွေထဲမှ အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ဟာ အဓိက အကျဆုံးဖြစ်ပေမည့် ဒီ အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေ ရဲ့ အမျိူးသားရင်ကြားစေ့ရေး ၊ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရီစီ နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေး တွင် ကန့် လန့် ပြိးအနှောင့်အရှက်ပေးချင်နေသူ ၊ နောက်ကြောင်းပြန်လည့်ချင်နေသူ ၊ ကိုယ်ကျိူးရှာသူ ၊ လက်တစို့ စာကောင်းစားရေးအတွက် နောက်ဆံသင်းနေသေးသူများ စသည်များဖြင့် အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး၊ တိုင်ပြည်တိုးတက်ရေး၊ ဒီမိုကရီစီ နိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေးများအတွက်နှောင့်ရှက် ဖျတ်ဆီးလိုသူများလည်း ပါရိနေပါသည်။
ဥပမာ ၊ ရခိုင် အရေး ကြည့်မည်ဆိုရင် မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ နေရပါသည်။ ဒေသခံ ရခိုင်များ မှ မိမိ ဒေသမှ အဖိုးတန် ရတနာများရောင်းရသည့်ငွေ တွေအား ဒေသဖွင့်ဖြိုးရေး အ တွက် ရာခိုင်နုန်းအနည်းငယ် တောင်းဖို့ ကြံစေတာပဲရှိသေးတယ် ။ မလိမ့်တပတ် နည်းမျိုးဆုံ များ သုံးကာ ရခိုင်လူမျိုးများမှ ဘာမှ တောင်းခွင့်မရတော့ပဲ ကယ်ကြပါ ကယ်ကြပါ လို့ ဖြစ်လာအောင် ရခိုင် ၊ ဘင်ဂါလီ အရေးစတော့တယ်။ ကျောက်နီမှော် အဖြစ်အပျက်အားပြန်ကြည့်လိုက်ရင် ၊ အခင်းဖြစ်ပြီ နေ့ မကိုးခင် အန်တာ နက်စာမျက်နာတွင် တခါတည်း ဖြန့် ခြင်း ၊ မင်းမဲ့စရိုက်ဆံ စွာ နေ့ ခင်းကြောင်တောင်ကြီး တောင်ကုတ် လူသတ် ပွဲကြီး များသည် နောက်ကြောင်း ပြန်လှည့်ချင်တဲ့ လက်တစုပ်စာ တရုတ်အားကိုးသူများ၏ ပတ်စက်သည့် အကြံ များ ဖစ်ပါသည် ။ အရှေ့ကိုပဲ ဆက်ဆက်သွားချင်နေတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ များ၏ အကြံမဟုတ်ကြောင်း မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့နေရပါဥည်။
ကချင်အရေးလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပဲ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှ အပစ်အခတ်ရပ်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ် ညွန်ကြားထားရဲ့ သား နဲ့ ၊ မိမိအာဏာ ၊မိမိ အရှိန်အ၀ါ များဆက်လက်ပြချင်တာတပိုင်း ၊ တရုတ်တွေဆီမှ အဆိုးမြန် အမွေများ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းချင်တာတကြောင်း ၊ ယခင် အာဏာ များဖြစ်သည့် အထူးအခွင့်ခံ အယူအဆများ အပြင် နောက်ဆံ သင်းနေသူ တချို့ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍန် အဖွဲ့ များ၏ အာဏါ လွန်ဆွဲပွဲကြောင့် အခုလို ကချင်အရေး ကြံ့ကြာသွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ကချင် များသည် စစ်မှန်ပြီးတရားမျှတတဲ့ ဒီမိုကရီစီနိုင်ငံတော်ကြီးဆီ ဦးတည်နေသည့် ဦး
သိန်းစိန် အစိုးရ ဦးဆောင်မှူအောက်ရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အမြန်ဆုံးတွေဆုံကာ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ရနိုင်အောင် အမြန်ဆုံးပြုလုပ်ဆောင်ရွတ်စေချင်ကြောင်း အကြံပြုချင်ပါသည် ။ ထိုသို့ ပြု လုပ်ဆောင်ရွတ်ခြင်းကြောင့် အထက်ပါ နောက်ဆံသင်းနေသူများ အတွက် နေစရာနေရာများတဖြီးဖြီးပျောက်ဆုံးကာ ဖွင့်ဖြိူး သာယာသည့် အနာဂတ် နိုင်ငံတော်ကြီး တည်ဆောက်နိုင်ပြီး မိမိတိုင်းရင်းသူ တိုင်းရင်းသား များ အေးအတူ ပူအမျှ ထာဝရ နေနိုင်မည်ဖြစ်သည် ။
Reply	ohnmar January 22, 2013 - 2:59 pm	Absolutely right.
Reply	Ngwe Soe January 22, 2013 - 12:59 am	Absolutely. 1994 Cease Fire was justawaste of time and later KIO got manipulated. It never bore the political solution, instead KIO received pressure to transform the KIA into border-guard position. Now, how nay lies and cheats we have seen and witnessed inafew days? Used of helicopters, use of fighter jets, shelling of Laiza which killed civilians, declaration to stop war by Thein Sein. How many times they lied and cheated even inaweek? How can the ethnics trust this nonsense words from Burmese junta? Instead, KIA must keep standing on its ground and belief firmly. Political Talk(Dialogue) through mediator(any government outside of Burma) is needed to make sure Burmese government is sincere. This time, we have seen the seriousness of KIO/KIS’s willingness to achieve political goal. UNFC needs to take its stand and demand with urgent voice.
Reply	AunG January 22, 2013 - 8:14 am	The stand of KIO is right. In Fact, burma army generals and leaders are the same group, they are Liars…
Reply	Nwar Kyaungthar January 23, 2013 - 11:47 am	This is very wise idea. We should never allow the Burmese junta to bully us around. Union is strength. United we stand, divided we fall. We the ethnics need to stick together to confront this idiot bully. We allowed this bullshit to bully us for too long. This time, the bully must be tamed. Let’s ride this stupid bull around. This is our turn.